Shawei Dhijitari Zhizha Sports musangano
Kuti isimbise kugona kwekubatana, kambani yakaronga uye yakaronga musangano wezhizha wezhizha Munguva iyi, zviitiko zvemitambo zvakasiyana zvakarongedzwa kukwikwidza neChile nechinangwa chekusimbisa kubatana, kutaurirana, kubatsirana pamwe nekurovedza muviri kwe ...
SIGN CHINA -MOYU tungamira yakakura fomati midhiya
Shawei Digital akapinda CHIRATIDZO CHINA yead yega yega, kunyanya kuratidza iyo "MOYU", inotungamira mhando mumusika wehunyanzvi Huru fomati yekudhinda midhiya.
LABEL EXPO RATIDZO DIGITAL LABEL
SW LABEL yakapinda chiratidziro cheLABEL EXPO, ichinyanya kuratidza ZVESE zvakateedzana zveDhijitari zvinyorwa, kubva kuMemjet, Laser, HP Indigo kuenda kuUV Inkjet. Izvo zvigadzirwa zvine mavara zvakakwezva vatengi vazhinji kuti vatore sampuli.
APPP EXPO muShanghai yePVC Mahara 5M upamhi yekudhinda midhiya
SW Dhijitari aipinda APPP EXPO muShanghai, kunyanya kuratidza Huru fomati yekudhinda midhiya, max upamhi ndeye 5M. Uye pachiratidziro chiratidziro zvakare kusimudzira zvinhu zvitsva zve "PVC YEMAHARA" midhiya.
Shawei dijitari Kunze Kufamba muGreat Angie Sango
Munguva yezhizha inopisa, kambani yakaronga nhengo dzese dzechikwata kutora rwendo rwekuenda kuAjiji kunotora chikamu mukushanya kwekunze. Mepaki dzemvura, nzvimbo dzekutandarira, nyama yekubheka, kukwira makomo nekukwirisa zvakarongedzwa Uye nezvimwe zviitiko zvakawanda. Tichisvika padhuze nemasikirwo uye tichizvivaraidza isu, isuwo st ...